Soo Iibso Musikada Qarsoon ee Muusikada Karaoke Microphone Alaabta - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Funny Wireless Music Karaoke Nalalka Mashiinka
Shiinaha / Random Mareykanka / Random
Muusikada Quruxsan ee Muusikada Karaoke Laydhka Microphone-ka - China / Random gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca caaga ah: PVC
Number Model: Nalalka Hurdada KidsToys
Nooca Item: Light
size: 15cm * 4.5cm
Goobta Aagga: Ku raaxee fiidkii weyn ee muuqaalka fartaada.
Waxyaabaha: Balaastikada & Qeybaha elektarooniga ah
Style: Wiilasha Qalabka Ciyaaraha / Dhar farabadan oo fudud
Length: ku saabsan 15cm
Xadka: ku saabsan 4.5cm
Miisaanka: ku saabsan 20g
List Xidhmada: 1PC Microphone Model Gift
wspaniały! święci na 2 kolori i miga
cute laakiin wali iskuma dayin
tayada caaggu waa mid aad u liita. Si kastaba ha ahaatee dukaanka ayaa i siiyay 100% lacag celin.
19 maalmaha maraakiibta maraakiibta Mareykanka
wiilashayda ayaa ku nool. Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay inaan dalbado mid kale si ay u joojiso inay la dagaalanto mid ka mid ah loolka